Koreen Dhaabbii Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa’e – Fana Broadcasting Corporate
Koreen Dhaabbii Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa’e
Finfinnee, Onkololeessa 27, 2012 (FBC) – Koreen Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa’eera.
Manneen hojii Koree kanaan hordofaman, Biiroo Misooma Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa, Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa, Abbaa Taayitaa Geejjiba Oromiyaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaa fi Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa Oromiyaa yommuu ta’an manneen hojii kunniin, gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa sektara isaanii koree kanaaf dhiyeesssanii jiru.
Akka waliigalaatti, Pirojektoota gurguddoo waggaa dheeraaf lafa irra harkifachuudhaan komii ummataa ta’an adda baasuudhaan xiyyeeffanna kurmaana 1ffaa taasisuuf hojiin hojjetame akka ciminaatti ilaalamee jira.
Haata’uutii, manneen hojii kanneen biratti rakkoon bulchiinsa gaarii, diizaayiniirraa eegalee harkifannaa piroojektootaa jiraachuu fi yeroo kaa’ameef keessatti xumuramuu dhabuun, qooda fudhattootaa waliin qindoominaan hojjechuurratti hanqinni kan jiru ta’uun gamaaggama taasifame irraa hubachuun danda’ameera.
Dura Taa’aan Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa Obbo Ahimad Mahammad dhimmoota rakkoo bulchiinsa gaarii ta’an adda baasuun hatattamaan deebii kennaa deemuu qabna jedhaniiru.
Argannoowwan oodiitii akka mana hojiitti adda bahaniif xiyyeeffanna kennuu, piroojeektota gurguddoo xumuuraman tajaajila uummataatiif banaa taasisuun karoora KGT 2ffaaf karoorfame karaa milkeessuun danda’amuun bara kana xiyyeeffannoo addaan hojjetamuu akka qaban himaniiru.